DHEGEYSO-Maamulka gobolka Banaadir oo kahadlay dilka General Goobaale. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Maamulka gobolka Banaadir oo kahadlay dilka General Goobaale.
Seteembar 18, 2016 10:37 b 0
Muqdisho, Sep 18 2016-Maamulka gobolka Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax lala beegsaday gaari uu watay General Maxamed Rooble Jimcaale (Goobaale) oo ahaa Taliyahii Guutada 3-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo wareysi siiyay Radio Daljir ee ayaa sheegay in Qaraxan ay ku dhinteen Gen. Goobaale iyo 6 ka mid ah Ilaaladiisa, halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 4 Qof oo shacab ah.
RW Cumar,*General Goobaale wuxuu ahaa shaqsi qaranka u adeegayey*
Dhagayso Diyaaradaha Kenya oo Duqeyeeyay Ceel-waaq deegaanno hoos taga